7 सामग्री मार्केटिंग रणनीतिहरू जो ट्रस्ट र शेयरलाई प्रेरणा दिन्छन् Martech Zone
केहि सामग्री अरु भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्न को लागी, अधिक सेयरहरु र अधिक रूपान्तरणहरु जीत। केहि सामग्री भ्रमण गरियो र अधिक साझा गरियो, तपाईंको ब्राण्डमा अधिक र नयाँ व्यक्ति ल्याउँदै। सामान्यतया, यी टुक्राहरू हुन् जसले मानिसहरूलाई यो विश्वास गर्दछ कि तपाईंको ब्रान्डले भन्नको लागि सार्थक चीजहरू छन् र सन्देशहरू जुन तिनीहरू साझेदारी गर्न चाहन्छन्। तपाईं कसरी एक अनलाइन उपस्थिति खेती गर्न सक्नुहुन्छ जसले उपभोक्ताहरूको विश्वास जित्ने मानहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ? यी निर्देशनहरू सम्झनुहोस् जब तपाईं आफ्नो सामग्री मार्केटि strategy रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ:
आफ्नो विशेषज्ञता प्रदर्शन गर्नुहोस्
सम्भावित ग्राहकहरूको विश्वास जित्ने उत्तम उपायहरूमध्ये एउटा यो देखाउनु हो कि यदि उनीहरूले तपाईंलाई छान्छन् भने तिनीहरू सक्षम हातमा हुनेछन्। सामग्री सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाइँको उद्योगसँग घनिष्ट परिचित हुनुहुन्छ भनेर देखाउँदछ। पछिल्लो उत्तम अभ्यासहरूको बारेमा पोष्टहरू लेख्नुहोस्। किन एक पद्धति अर्को भन्दा माथि छ भनेर वर्णन गर्नुहोस्। सामान्य गल्तीहरू कसरी प्रदर्शन गर्ने र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने भन्ने सूची लेख बनाउनुहोस्। यस प्रकारका टुक्राहरूले तपाईको सम्भावना देखाउँदछ कि तपाई के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ र तपाईलाई राम्रो गर्न विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ।
सामग्री सिर्जना गर्नुहोस् जुन पाठकहरूको आवश्यकताहरूको उत्तर दिन्छ
जब व्यक्तिहरू तपाईंको साइटमा सामग्री हेर्न शुरू गर्दछन्, यो प्राय: किनभने तिनीहरूसँग निश्चित प्रश्न छ जुन तिनीहरू जवाफ दिन चाहन्छन्। यस्तो सामग्री सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाईंको सम्भावनाहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्दछ र उनीहरूको दुविधा समाधान गर्ने तरिका निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। उदाहरण को लागी, यस्तो हुन सक्छ कि जो उसको एयर कन्डिसनको समस्यामा परेको छ उसले एयर कंडीशनरको चिसो हावा उडाउन रोक्नको लागि सामान्य कारणहरू पढ्न थाल्छ यसैले HVAC कम्पनी बाहिर आउन र उसको प्रणाली सेवा गर्न छनौट गर्न सुरु गर्नु भन्दा पहिले। । उनको प्रश्नको उत्तर दिन एक जना भएर, तपाईंले आफ्नो विशेषज्ञता र उनको मुद्दामा उनलाई मद्दत गर्न इच्छुकता देखाउनुभयो।
व्यक्तिहरूले ब्रान्डलाई विश्वास गर्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ जुन सामान्य प्रश्नहरूको जवाफ सरल र सहयोगी तरीकाले प्रदान गर्दछ, व्यक्तिगत स्क्रोल धेरै सामग्रीको माध्यमबाट बिना नै उनीहरूलाई चाहिने बिट पाउन। तपाइँको ग्राहकहरु लाई तपाइँको साइट मा के फेला पार्न आउँछ भन्ने जानकारी दिई, तपाइँ यसलाई अधिक सम्भावित बनाउन सक्नुहुन्छ कि, तिनीहरुलाई उत्पादन वा सेवा चाहिएको छ कि, तपाइँले छनौट गर्नु भएको एक तपाइँ नै हुनेछ।
तिनीहरूलाई मात्र नभन्नुहोस्; तिनीहरूलाई देखाउनुहोस्
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले गर्नुभएको कुनै पनि दावीहरूको ब्याक अप गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यसो नगर्नुहोस् कि तपाईंसँग तपाईंको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धी दरहरू छन्। चार्ट वा इन्फोग्राफिक सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाईंको दरहरू तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूसँग तुलना गर्दछ। खुशी ग्राहकहरूबाट प्रशंसापत्रको उद्धरणको साथ उच्च ग्राहक सन्तुष्टि को दाबीहरूको ब्याक अप। कुनै कुरा फिर्ता बिना खाली दाबी यसलाई उपेक्षित वा सम्भावित नै खराब हो, पाठकलाई शicious्कास्पद महसुस गराउनको लागि। यदि तपाईं प्रमाणको साथ बनाइएको हरेक दावीलाई समर्थन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, यसले तपाईं इमान्दार हुनुहुन्छ भनेर देखाउँदछ र तपाईं उनीहरूको भरोसा र तिनीहरूको व्यापारको योग्य हुनुहुन्छ।
तपाईंले सुन्नुहुने पाठकहरू देखाउनुहोस्
अनलाइन मिडिया सामाजिक प्रकृतिमा छ। हामी सबैसँग हाम्रो सोपबक्सहरू छन्, चाहे हाम्रो दर्शक हजारौंको समूह हो वा परिवार र साथीहरूको सानो सर्कल हो। जब तपाईं अनलाइन पोष्ट गर्नुहुन्छ, तपाईं कुराकानीमा संलग्न हुनुहुन्छ। आफ्ना सम्भावना र ग्राहकहरू देखाउनुहोस् जुन तपाईं सुन्नुहुन्छ र बोल्नुहुन्छ।
तपाईंको ब्रान्डको उल्लेखको लागि तपाईंको सामाजिक च्यानल मोनिटर गर्नुहोस्। तपाईंको ब्लगमा टिप्पणीहरू पढ्नुहोस्। हेर्नुहोस् कि मानिसहरू केमा खुशी छन् र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उनीहरू के होइनन्। जब यो गर्न उचित हुन्छ, तपाईंको ब्लग वा तपाईंको सोशल नेटवर्कि channels च्यानलमा ग्राहकहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुहोस्। जब व्यक्तिले देख्छ कि एक ब्रान्ड उत्तरदायी छ, उनीहरू आफ्नो व्यापारको साथ त्यो ब्रान्ड सुरक्षित सोच्न बढी सम्भावना गर्दछन्।
सामाजिक प्रमाण प्रस्तुत गर्नुहोस्
जब हामी देख्छौं कि अरूहरू, हामी व्यक्तिगत रूपले चिनेका व्यक्तिहरू हौं वा ब्राण्डको साथ राम्रो अनुभव पाएका छौं, हामी ब्रान्डको दावीहरू भन्दा उनीहरूको शब्दहरूमा विश्वास गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। समीक्षा गर्नुहोस् र प्रयोगकर्तालाई तपाईंको सामग्रीमा उद्धृत गर्न प्रोत्साहन दिनुहोस् जब यो उपयुक्त हुन्छ। वास्तविक ग्राहकहरूबाट आएका टिप्पणीहरूले अरूलाई डुबाउन र तपाईंको ब्रान्डको साथ व्यवसाय गर्दा बढी सहज महसुस गर्न सक्दछन्।
BuzzSumo विश्लेषण गरियो २०१'s को सबैभन्दा धेरै भाइरल पोष्टहरू ट्वीटर, फेसबुक, र लिंक्डइन समावेश गरेको नेटवर्कमा। र, सबैभन्दा धेरै लोकप्रियहरू केहि हुन् जसमा केही भावनात्मक तत्त्व समावेश थियो। व्यक्तिहरूले पोष्टहरूमा सकरात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरे जुन हृदयको हृदयस्पर्शी र मानिसहरूका बारेमा सकारात्मक कथाहरू समावेश गर्दछ। उनीहरूले पनि कथाहरू साझा गर्ने सम्भावना थियो जुन कुनै तरिकामा विवादास्पद वा चौंकाउने थियो।
तपाईंको व्यवसायको लागि सामग्री सिर्जना गर्दा, विशेष प्रस्तावले तपाईंको पाठकहरूलाई कस्तो महसुस गराउन सक्छ भन्ने सोच्नुहोस्। के तिनीहरू पेचीरहेका वा अलमल्लमा छन्? के तिनीहरूले कथामा व्यक्तिहरूसँग पहिचान गर्नेछन्? यस प्रकारका प्रतिक्रियाहरूले तपाईंको सामग्री प्रस्तावहरूलाई बढी सान्दर्भिक र व्यक्तिगत महसुस गराउँदछ। यी कथाहरूका प्रकारहरू हुन् जसमा टिप्पणीहरू र साझेदारीहरू हुन सक्छन्।
के तपाईंको ब्रान्डले व्यक्तिगत उपभोक्ताहरू वा साना व्यवसायहरूसँग काम गर्दछ? त्यहाँ केहि ग्राहकहरु छन् कि तपाईका उत्पादनहरु वा सेवाहरु तिनीहरु लाई एक प्रमुख तरिका मा लाभदायक भएको छ? के तपाईंसँग ग्राहकहरू छन् जो उनीहरूको आफ्नै अधिकारमा असाधारण छन्? ती ग्राहकहरूको कथाहरूको बारेमा भिडियो वा ब्लग सामग्री सिर्जना गर्ने विचार गर्नुहोस्। एक व्यक्ति मा ध्यान केन्द्रित व्यक्ति कसैलाई सम्बन्धित गर्न दिन्छ। उनीहरूले तपाईको उत्पादनलाई तपाईको जीवनमा देख्दैनन् यदि तपाईं उनीहरूलाई सुविधाहरूको सूची दिनुहुन्छ भने। यसले कसरी कसैको दिन दिनको गतिविधिहरू बढावा गरेको छ वा बढाउँदैछ भनेर देखाउँदै, तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूलाई तपाईंको उत्पादन कसरी लाभदायक हुन सक्दछन् भनेर देखाउन मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ।
जब तपाइँको सामग्री साझा हुन्छ, तपाइँ सम्भावित ग्राहकहरु को लागी तपाइँको ब्रान्ड प्राप्त गर्नुहुन्छ जो कि अन्यथा देखेको छैन। र तपाई सामाजिक प्रमाण प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन व्यक्तिगत सिफारिशबाट आउँदछ। अधिकांश व्यक्तिहरू अत्यन्त विवेकी हुन्छन् जब उनीहरू सामग्री साझा हुन्छन्। सबै पछि, त्यो साझेदारी तपाइँको सामग्रीमा के समावेश छ भन्नेको एक निषेध समर्थन हो। तपाईंको ब्रान्ड उनीहरूको ध्यान र उनीहरूको विश्वासको योग्य छ भनेर देखाउँदै रूचि र भावना उत्पन्न गर्ने सामग्री सिर्जना गरेर, तपाईं आफ्ना सेयरहरू बढाउन सक्नुहुनेछ, सुदृढ सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ र कन्भर्ट भएको सामग्रीको फाइदा देख्नुहुनेछ।
टैग: सामग्री मार्केटिङसामग्री शेयरभावनाविशेषज्ञतासामाजिक सेयर बढाउनुहोस्विश्वास बढाउनुहोस्विश्वास प्रेरणासुन्दैव्यक्तिगतशेयरतिनीहरूलाई देखाउनुहोस्सामाजिक प्रमाणतिनीहरुलाई भनविश्वास गर्नुहोस्
भविष्य बेरोजगार होइन र कहिल्यै भएको छैन